यस्तो छ तपाईको आजको राशिफल, आज यी राशिका व्यक्ति हुनेछन् लाभान्वित « Sansar News -->
यस्तो छ तपाईको आजको राशिफल, आज यी राशिका व्यक्ति हुनेछन् लाभान्वित
४ श्रावण २०७७, आईतवार ०८:३५
बेलामा होस नपुर्याउँदा केही समस्या झेल्नुपर्ला । रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ । तर, परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्छ । सहयोगीहरूको सहमति नजुट्नाले काम रोकिन सक्छ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला । दिगो काम प्रारम्भ गर्न केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ । हिसाबकिताबमा होसियार रहनुहोला । आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्दा फाइदा उठाउन सकिनेछ ।
आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ । हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ । तापनि मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ । अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ । शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला ।
केही कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपरे पनि चिताएको काम सम्पादन हुनेछ । पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ । पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
परिश्रमका तुलनामा प्रतिफल कम देखिनेछ । खर्च तथा विवाद बढ्ने समय रहेकाले महत्त्वाकांक्षी योजनामा अघि नबढ्नुहोला । पाउमा चोटपटकको योग देखिएकाले सजग रहनुहोला । छर–छिमेकमा केही असमझदारी बढ्न सक्छ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ । खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ला ।
नयाँ काम तथा उठ्नुपर्ने रकम रोकिन सक्छ । नियमित काम, उद्योग र व्यापारमा सामान्य फाइदा हुनेछ । विगतका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ । समयमा सजग नहुँदा आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् । परिश्रम परे पनि कम प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । आवश्यकता पूरा गर्न सरसापट लिनुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका नयाँ स्रोत भने फेला पर्नेछन् ।
पहिलेका कमजोरी बाहिर आउनाले प्रतिष्ठामा समस्या पर्न सक्छ । आँटले काम लिन नसक्दा पछि परिनेछ । अहिलेको फाइदा हेर्दा पछिको फाइदा घट्नेछ । कामको तालमेल नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ । ईर्ष्या गर्नेहरू सक्रिय रहनेछन् भने अवसरवादीहरूले कमजोरीको फाइदा उठाउनेछन् । सानातिना काममै अल्झनुपर्दा उद्देश्यबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
प्रयत्न गर्दा नयाँ काम थालनी हुनेछ । सहयोगीहरूले पनि राम्रो सहयोग जुटाउनेछन् । समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ । तर परिस्थितिवश फाइदा नहुने काममा अलमलिनुपर्ला । श्रम परे पनि सोचेको मूल्य प्राप्त नहुन सक्छ । आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् । जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि उपलब्धिका लागि समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला ।
अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीमा जोखिम बढ्ने समय छ । गोपनीयता बाहिरिन सक्छ । स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। कमजोर नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनुपर्ला । श्रम परे पनि मिहिनेतको उचित मूल्य प्राप्त नहोला । प्रतिफल प्राप्त गर्न समय लाग्नेछ र न्यून उपलब्धिका लागि धेरै समय खर्च हुनेछ ।
घुमफिर तथा मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ । तर, विचार नमिल्नाले आफन्तसँग मतभेद हुन सक्छ । वादविवादले साथीभाइमा फाटो ल्याउनेछ । निम्तो आए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्न सक्छ । भेटघाटले काममा अलमल्याउन सक्छ । तापनि मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ । उठ्नुपर्ने रकम तत्काल हातलागी नहुन सक्छ । व्यापारको बहानामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ ।
वैधानिक प्रावधानले केही अप्ठ्यारो पार्नेछ भने अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नुपर्नेछ । केही चुनौतीहरू देखिनेछन् । सानातिना काममै अल्झनुपर्नेछ भने पहिलेका समस्या दोहोरिन सक्छन् । अस्वस्थताले लक्ष्यअनुसार काममा जुट्न नसकिएला । सहयोगीहरू पछि हट्नाले नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न समस्या पर्नेछ । व्याहारिक अलमलले पनि आँटेका काममा बाधा पुर्याउनेछ ।
कुम्भ गु, -गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द
अवसर आए पनि नयाँ काममा हातहाल्नुअघि विचार पुर्याउनुहोला । समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा दुःख पाइनेछ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला । पेटको खराबीले स्वास्थ्य कमजोर हुन सक्छ । गुरुजनसँग मतभेद हुनाले अध्ययनमा पछि परिनेछ । समयको सदुपयोग गर्न नसकिएला । तापनि चुनौती पन्छाएर नयाँ काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
आवेशको निर्णयले समस्या निम्त्याउनेछ भने अवसरलाई पछ्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि परिनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्याउलान् । आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। मिहिनेत गर्दा जटिल ठानिएको काम समेत सम्पादन हुनेछ । आफन्तजनले उत्साह जगाउनेछन् र दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । टाढिएका सन्तानलाई आमाको यादले सताउन सक्छ ।
वि.सं. २०७७ साउन ४ आइतवार इ.स. २०२० जुलाई १९